Ukuqhuma kokuThengiswa koMxholo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 10, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Amasebe ezentengiso nawentengiso ahlala esenza intengiso yomxholo… kwakulula kakhulu ukuthengisa izinto zakho xa wawunobungqina babathengi, amaphepha amhlophe, uphando lwamatyala, ii-imeyile kunye namanye amaxwebhu ukunceda ukufundisa umthengi. Ngoku oko kungumxholo inokukhangelwa kwaye kwabelwane ngayo ngewebhu, nangona kunjalo, kuye kwafuneka size nolunye uhlobo lwamagama kuyo… UkuThengiswa kweMpahla. Ngenxa yokuba abathengi banikwe amandla okufumana ulwazi ngokwabo, ukuthengisa umxholo kubalulekile kuba umxholo wakho kufuneka ufumaneke kukhangelo nakwiinethiwekhi zabo bajongileyo.
Amashishini abo bonke ubukhulu aqala ukuqaphela ukuba isicwangciso esiqinileyo somxholo kufuneka sibe njani kwizicwangciso zabo zokuthengisa. Nokuba iinkampani ezinkulu ezinjengeCoca-Cola zibheja yonke into kwisicwangciso esihlanganisiweyo somxholo. Ukuhamba ngeposi yiBluegrass